Nidaamka calaamadda elektarooniga ah ee calaamadda elektarooniga ah dukaamada soo saaraha iyo alaab-qeybiyeha Zkong
Nidaamka calaamadeynta qalabka elektaroonigga ah ee loo yaqaan 'Blutooth e pricer label' sumcadda qiimaha elektaroonigga ah
-Name: Blutooth e pricer label smart smart tag nidaamka calaamadeynta elektaroonigga ah dukaamada elctronics
- Cabbir kale: 1.54 ”, 2.13 ″, 2.7 ″, 2.9”, 4.2 ”, 5.8 ″, 7.5 ″ 11.6 ″, 13.3 ″
-Luuqadda: Shiineys, Ingiriis, Polish, Isbaanish, Ruush, Jabaaniis, Thai, Carabi, iwm.
-Tusaale: cadaan, madow, casaan / jaalle
Blutooth E Pricer Label Smart Price Tag Nidaamka Calaamadaha Elektarooniga ah Bakhaarada Elctronics
Xalka calaamadeynta shelf-ka elektarooniga ah ee 'Zkong' (ESL) wuxuu kaa caawinayaa inaad waqtiga ku keydiso cusboonaysiinta qiimaha otomaatiga ah. Waa ka kharash badan yahay warqadda, waxayna hagaajineysaa macaamiishaada khibrada ay la leedahay qiime sax ah oo la isku halleyn karo. Waxaa socodsiiya xalka runti-heer shirkadeed iyadoo la adeegsanayo hal server oo keliya, oo la isku darayo Bluetooth, Wi-Fi iyo tiknoolajiyada kumbuyuutareedka, oo bixinaya qiimaha ugu hooseeya ee lahaanshaha iyo maaraynta ugu dabacsan. Majiraan wax adeegyo ah oo dukaanka looga baahan yahay si loo ogaado maareynta daruurta ku saleysan ee sahlan oo wax ku oolka ah
Zkong ESL wuxuu ku badali karaa qiimaha iyo dallacaadaha hal shelf oo leh agility, ama malaayiin, meel kasta, ilbiriqsiyo. Ogow qiimahaagu inuu sax yahay, had iyo jeer. ESLs waxay isku dubbaridaan qiimaha iyo cusboonaysiinta macluumaadka ee dukaamada. Si toos ah ugula xiriir qiimahaaga shelf. Tani waxay yareyn doontaa shaqada iyo kharashyada la isku raaci karo, waxay sare u qaadi doontaa hannaanka maaraynta dukaanka waxayna yareyn doontaa cabashooyinka ay keeneen khaladaadka qiimaha
ESL-yada si buuxda u sawiran waxaa loo isticmaali karaa in lagu muujiyo dhiirrigelinta iyo, iyadoo la adeegsanayo calaamadeenayada 'Bluetooth', in badan oo shaqsiyadeed, soo jiidasho leh iyo abaalmarinno dalabyo ah ayaa loo diri karaa taleefannada casriga ah ee macaamiisha iyadoo lagu saleynayo dhaqankooda iibsashada - laga soo bilaabo taariikhda raadinta illaa wixii la soo iibsaday. Waxaa intaa dheer, waxaad la wadaagi kartaa magacyada si aad ugu dhiirrigeliso alaabadooda calaamadahaaga, dakhliga ka soo kordhaya geesaha-geesaha oo noqon doona mid dhaqso badan, indho-qabad leh - oo faa'iido leh.
Zkong ESL sidoo kale waxay dhisi kartaa shaqsiyadeed, is-dhexgal iyo ka-qaybgal khibrado dukaan ah. Iyada oo Internet-ka Waxyaabaha (IoT) ay karti u siisay ESLs, abuur dukaamo isku xiran oo dijital u noqo khaanaddaada si aad ugu beddesho calaamado aan xadidnayn ilbiriqsiyo, oo aad u dhisto khibrad shaqsiyadeed, is-dhexgal iyo soo jiidasho leh.
Waad sii milmi kartaa khibradaha dalwaddii iyo dukaankii aad ku jirtay adigoo soo bandhigaya xog ay macaamiisha ku qiimeeyaan khadka tooska ah, sida qiimaha tartamayaasha, heerarka saamiyada, iyo dib u eegista bulshada. Iyo, waxaad tusi kartaa macluumaad kasta - tusaale ahaan qiimaha kiilo, asalka, macluumaadka dib u warshadeynta iyo waxyaabo kaloo badan. Khibradaha nooca sidoo kale waa la dallacin karaa, sida aqoon isweydaarsiyada cuntada lagu kariyo, tiknoolajiyada 'sida loo' hagayo iyo fasallada jir dhiska.
Si otomaatig ah u socodsiiso geedi socodkaaga adoo adeegsanaya Xallinka Muuqaalka Muuqaalka Calaamadeysan ee ZKONG.
Hore: Qiimaha Dijital ah ee loo yaqaan 'Shelf Label Pricer ESL' ee Dukaamada Tafaariiqda Supermarketka ah
Xiga: Qiimaha Display Tafaariiqda Ikhtiyaariga ah Esl Label Hadalka Dijital ah ee Hadalka Heerkulka Hoose